Global Voices teny Malagasy » Shina : Fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka, sendikà ary demaokrasia an-dalambe · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina : Fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka, sendikà ary demaokrasia an-dalambe
Voadika ny 03 Desambra 2008 9:18 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Politika, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna
Nitokona nanditra ny iray volana ny mpamily fiarakaretsaka nanerana ny firenena. Tany Chongqin no nitranga ny fitokonana voalohany tamin’ny 3 Novambra teo, niitatra tany Hainan, Gansu, Yunnan, Shandong, Qingdao, Jinan, Fujian, Shantou, Wubei, Shaanxi ary tanàna hafa maro koa izany.
Tahaka ny hoe nisy fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka ny 1 Desambra teo tany Guangzhou (efa fotoana lasa manko ka izay no nanaovako azy ho fotoana lasa ihany koa), ary efa nisy ny taratasy fanentanana ho amin’izany nandehandeha. Nandika azy ho azo vakiana anaty solosaina i Beifeng ka nametraka azy tao amin’ny bolongany ; naka dika avy amin’izany i Chong ka nametraka azy tao amin’ny inmediahk.net  :
受世界金融風暴影響，廣州出租行業面臨巨大的生存考驗，近段時間出租車司機叫苦連天。現在市面上存在很多異地出租和私家小汽車同我們正規出租車争食 的現象，廣州市政府和交委管理無力，不能給我們一個良好的營運環境。公司承包費用太貴，我們身上的擔子太重了，重加上各方面對我們的出租車的欺壓，違章還 要停場，這些種種，把我們的司機朋友都快壓跨了。所以，現在倡議全市出租車司機朋友在２００８年１２月１日上午８點３０分到廣園路廣州市交委和東風路廣州 市政府聚集，向交委和市委提出我們的要求，希望能得到滿意的答覆。希望各位司機朋友積極參與，為我們這個行業的發展，也為了你個人的利益。
Ho an’ny namana mpamily fiarakaretsaka rehetra eto Guangzhou:
Miady ho amin'ny fahavelomana ny orinasan’ny fitondrana piklà eto Guangzhou fa tratran’ny Kirizim-bola manerantany koa. Niaritra ny mafy izay tao ho ao ny mpamily piklà fa ianjadian’ny fifaninanana tsy mety avy amin’ny piklà an’olona manokana avy any amin’ny faritany hafa. Nefa, tsy mahara-maso ny toe-java-misy ary tsy manatsara ny tontolon’ny fandraharahana misy antsika ny mpitondra ny tanànan’i Guangzhou sy ny vaomieran’ny fitaterana. Lafo be ny hofan’ny piklà ka mavesatra loatra ho antsika. Teran’ny lalàna maro isankarazany isika ary ny fandikana na dia ny iray amin’ireny aza dia mitarika ho amin’ny fanesorana ny taratasy fahazoan-dalana hitondra piklà. Manempotra ny namantsika mpitondra piklà izany rehetra izany. Noho izany dia misolo tena ny namana mpamily piklà izahay hitsidika ny vaomieran’ny fitaterana eto Guangzhou izay miorina ao amin’ny lalana Guangyuen sy hitsidika ihany koa ny foiben’ny fitantanana ny tanànan’i Guangzhou any amin’ny lalana Dongfeng amin’ny 1 Desambra ho avy izao amin’ny 8:30maraina. Aterintsika any amin’ny mpitantana ny tanàna sy any amin’ny vaomiera ny hetahetantsika ary dia manantena valiny mahafapo isika. Maniry ny fandraisana anjaran’ny mpanao piklà rehetra ho fiarovana ny tombotsoantsika.
Raha manapa-kevitra ny hiaraka aminay ianao dia aza mitondra ny fiaranao amin’io andro io satria mety hanao zavatra tafahoatra ny mpamily sasany ka mety hanimba ny raharahanao.
(Ilazao ny namana mpitondra fiarakaretsaka ho an’izay maharay ity trakitra ity, ary mahafoiza vola kely hanaoana dika mitovy azy sy hampielezana azy amin’ny manodidina. Misaotra tompoko!)
Fizotran’ny fitokonan’ny mpanamory fiarakaretsaka
Tamin’ny 23 Novambra, dia nisy fifandonan’ny fiarakaretsaka iray tamina fiaran’olo-tsotra iray, izay nitarika fibahanan’ny fiarakaretsaka anjatony ny lalana lehibe rehetra. Nifampitohy tamin’ny fitokonan’ny mpanamory fiarakaretsaka rehetra nanerana ny firenena io toa-javatra io. Soritsoritan’i Xin Lijian ho antsika ny fizotran’ny  fitokonana nandritra ny volana Novambra:
3 Nov – Fitokonan’ny mpitondra piklà tany Chongqing
8 Nov – Wubei Jinzhou: Fitokonan’ny mpitondra piklà teo ho eo amin’ny zato noho ny halavan’ny filaharana teo ampividianana solika
10 Nov – Fitokonan’ny mpitondra piklà tany Sanya noho ny halafon’ny fanofana fiara
10 Nov – Fitokonan’ny mpitondra piklà mihoatra ny zato tany Gansu Yongdeng
19 Nov – Fitokonan’ny mpitondra piklà tany Chongqing
20 Nov – Fitokonan’ny mpitondra piklà tany Guangdong Shantou
24 Nov – Fitokonan’ny mpitondra piklà mihoatra ny zato tany Shaanxi faritanin’i Zhouzhi
Ilaina ny sendikàn’ny mpamily fiarakaretsaka
Navoitran’ny mpamaham-bolongana fa ny olana fototra dia noho ny fanambakana madinidinika ataon’ny orinasan’ny fiarakaretsaka (tompon’ny fiara):
中国的出租车行业的准入机制早已为这一系列的事情埋下了隐患。出租车本身可以做为私人经营的行业，通过行政审批的过程，最 后变成出租车公司来“代理出租车经营业务”，这样就为公司剥削司机提供了先天条件。而这一衍生的“出租车公司”，一直拥着垄断利润的最高层；而出租车司机 俨然成为这个垄断利益链的最底层。出租车司机除要交纳一定的公司费用之外，还要承担市场的风险，如油价、客源、交通处罚、车辆损耗等。还有个人的基本保障 问题，合法权益问题。这个问题长期以来存在的矛盾，最终得到集体性的暴发，也是意料之中的事情。
Manana olana anatiny miteraka ny fitokonana miverimberina ny orinasan’ny piklà. Teôrika dia mahazo manao taxi ny olona iray rehefa mahazo fahazoan-dalana. Nefa niofo ho mpanelanelana mandraharaha ny resaka fanamoriana piklà ny orinasan’ny piklà. Nanome fahefana hampiasa (hanambaka) ny mpamily piklà izany fandehan-draharaha izany. Nitana ny lohalaharana amin’ny resaka fandraharahana ny “orinasan’ny piklà” noho ny ampihimamba ananany eo amin’ny fakana tombombarotra; nefa etsy ankilany dia ny mpanamory pikl kosa no mitana ny rambony eo amin’ny fahazoana tombotsoa. Ankoatra ny fanomezana ny hofan’ny fiara, dia mbola ny mpamily ihany koa no miantoka ny vidin’ny solika, ny menaka, ny fikojakojana ny fiara, ny fandoavana ny sazy, miaritra ny fisian’ny fifaninanana rahateo sns. Misy ihany koa ny fifandonana mihatra amin’ny mpanamory piklà ankoatra ny fiarovana fototra sy zo fototra tokony ho azony, ary efa nitoetra ela ireo olana rehetra ireo ka tsy tokony hahagaga ny fisian’izao fiaraha-mientana izao.
Mba ahafahana mamaha ireo olana rehetra ireo dia nandroso sosokevitra ny mpamily fiarakaretsaka hanangana Sendikà iray ny vondron’ny sendikà rehetra manerana an’i Shina Manontolo hifampiraharaha amin’ny orinasan’ny piklà. Na izany aza dia nomarihin’i vahinin’i lakeside fa ny sendikà mahomby dia tsy maintsy tantanin’izay nofidian’ny mpamily fiarakaretsaka mivantana , fa raha tsy izany dia tsy hivaha ny olana:
Raha tena tiantsika ny hiarovana ny zontsika mpiasa, ny lalana mahomby indrindra amin’izany dia ny mametraka fifidianana demaokratika hametrahana ny solontenan’ny mpiasa ary mamela azy ireo hanana ny fizakana manokana eo amin’ny fifampiraharahana. Amin’nya lalan’izay ihany no hisian’ny fifandraisana mitovy tantana eo amin’ny mpiasa, ny fitondrana ary ny orinasa eo ampiaraharahana sy hahitana ny marimaritra iraisana amim-pilaminana.
Endrika fanao demaokratika tokoa ny fifampiraharahana iraisana, nefa, nofantenan’i Beifeng ny gazety iray avy any Singapaoro milaza fa tokony ekena koa ny endrika demaokrasia an-dalambe ataon’ny mpanamory fiarakaretsaka :
如何面对群体性事件频繁发生的状况，特别是面对以往贴了负面标签的“街头民主”行动，政府需要有适应事件与学习处理的过 程。《联合早报》的评论认为：“从政府层面而言，如何摆脱对街头民主的固有观念，鼓励和帮助公民社会的发展，将是一个新的课题，也是一个必经的政治转型过 程。”评论乐观地估计：“这次出租车罢工事件以及政府的处理方法可以说是一个转折点。它表明街头民主在中国也可以是一种民意表达的渠道，同样可以通过对话 和协商的形式得到和平解决。”
Tahaka ny ahoana no ijerentsika ny fiaraha-mientana miverimberina, indrindra fa eo ampiatrehana zavamisy afokaina ho demaokrasia an-dalambe any Shina izao? Izao angamba no fomba ahafahan’ny fitondrana mianatra mifampiraharaha amin’ity toe-java-baovao ity. Ny fanehoan-kevitra ao amin’ny Zaobao no mametraka fa “eo amin’ny fomba fijerin’ny fitondrana, mila mianatra manova ny fiheverany ny demaokrasia an-dalambe izy ary mampirisika ihany koa ny fampivelarana ny fiaraha-monim-pirenena amin’ny fomba fihetsika vaovao. Lalana tsy maintsy diavina izany eo amin’ny fiovana politika ihany koa ”. Manam-panantenana izany koa moa ilay fanehoan-kevitra: “Kihon-dalana ity fitokonan’ny mpanamory piklà sy ny fihetsiky ny fitondrana ity. Ity no maneho fa mety ho fantsom-panehoan-kevitra ny demaokrasia an-dalambe, mety hanana endrika fifanakalozan-kevitra sy fifampiraharahana hamahana olana amim-pilaminana ihany koa. ”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/03/1396/
 ka nametraka azy tao amin’ny bolongany: http://www.bullog.cn/blogs/wenyunchao/archives/229257.aspx
 naka dika avy amin’izany i Chong ka nametraka azy tao amin’ny inmediahk.net: http://www.inmediahk.net/node/1001655
 Soritsoritan’i Xin Lijian ho antsika ny fizotran’ny: http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?idWriter=0&Key=0&BlogID=1811551&PostID=15885360
 ny sendikà mahomby dia tsy maintsy tantanin’izay nofidian’ny mpamily fiarakaretsaka mivantana: http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?idWriter=0&Key=0&BlogID=1880213&PostID=15806779
 tokony ekena koa ny endrika demaokrasia an-dalambe ataon’ny mpanamory fiarakaretsaka: http://www.bullog.cn/blogs/wenyunchao/archives/227181.aspx